Mapisarema 44 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Munyengetero wekukumbira kubatsirwa
“Ndimi makatiponesa” (7)
‘Semakwai anofanira kuurayiwa’ (22)
“Simukai semubatsiri wedu!” (26)
Kumutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ Maskiri.* 44 Haiwa Mwari, takanzwa nenzeve dzedu,Madzitateguru edu akarondedzera kwatiri+ Mabasa amakaita mumazuva avo,Mumazuva ekare kare. 2 Neruoko rwenyu makadzinga marudzi,+Mukagarisa madzitateguru edu ikoko.+ Makapwanya marudzi, mukaadzinga.+ 3 Havana kutora nyika yacho nebakatwa ravo,+Uye ruoko rwavo harusi irwo rwakaita kuti vakunde.+ Asi rwaiva ruoko rwenyu rwerudyi nesimba renyu+ uye nechiedza chechiso chenyu,Nekuti maivafarira.+ 4 Muri Mambo wangu, haiwa Mwari;+Rayirai kuti Jakobho akunde zvakakwana.* 5 Nesimba renyu tichadzingirira mhandu dzedu;+Muzita renyu tichatsika-tsika vaya vanotipandukira.+ 6 Nekuti handivimbi neuta hwangu,Uye bakatwa rangu harikwanisi kundiponesa.+ 7 Imi ndimi makatiponesa pamhandu dzedu,+Mukanyadzisa vaya vanotivenga. 8 Tichaswera tichirumbidza Mwari,Uye tichaonga zita renyu nekusingaperi. (Sera) 9 Asi iye zvino matirasa, mukatinyadzisa,Uye hamuendi nemauto edu. 10 Munoramba muchiita kuti titize mhandu dzedu;+Vaya vanotivenga vanotora chero zvavada. 11 Munotiisa mumaoko avo kuti tibvamburwe-bvamburwe semakwai;Makatiparadzira pakati pemarudzi.+ 12 Munotengesa vanhu venyu nemutengo usina maturo;+Hamuna chamunowana pamunovatengesa. 13 Munoita kuti tizvidzwe nevavakidzani vedu,Tava kutukwa nevanhu vese vakatipoteredza uye vari kutinyomba. 14 Munoita kuti tive chiseko* pakati pemarudzi,+Vanhu vachidzungudza misoro yavo pavanotiona. 15 Ndinonzwa kunyara zuva rese,Uye handichagoni kusimudza musoro nekunyara, 16 Nemhaka yekushora kwavo nekutuka kwavo,Pamusana pekutsiva kuri kuita muvengi wedu. 17 Zvese izvi zvatiwira, asi hatina kukukanganwai,Uye hatina kuputsa sungano yenyu.+ 18 Mwoyo yedu haina kutsauka;Tsoka dzedu hadzitsauki panzira yenyu. 19 Asi makatipwanyira munzvimbo inogara hunguhwe;*Mukatifukidza nerima gobvu. 20 Kana takakanganwa zita raMwari weduKana kuti takatambanudza maoko edu tichinyengetera kuna mwari wekumwe, 21 Mwari angatadza kuzozviziva here? Anoziva zviri mumwoyo.+ 22 Nekuda kwenyu tiri kuswera tichiurayiwa;Takanzi tiri makwai anofanira kuurayiwa.+ 23 Mukai. Munorambirei makarara, haiwa Jehovha?+ Mukai! Musaramba muchitirasa nekusingaperi.+ 24 Munovanzirei chiso chenyu? Munokanganwirei kutambudzika kwedu nekudzvinyirirwa kwedu? 25 Nekuti tadzikiswa* muguruva;Miviri yedu yakatsimbirirwa pasi.+ 26 Simukai semubatsiri wedu!+ Tinunurei* nekuda kwerudo rwenyu rusingachinji.+
^ Kana kuti “ave neruponeso rukuru.”
^ Kana kuti “mweya yedu yadzikiswa.”
^ ChiHeb., “Tidzikinurei.”